Kuenzanisa Kukuru: Ona makumi maviri eTop Rated Cell Runhare Spyware Kwayedzwa muna20
Heino runyorwa rwevose yepamusoro yakarongwa nhare mbozha spyware software izvo zvinogona kuwanikwa pamusika.
Isu kumaPhones spy takagadzira iyo kuenzanisa kukuru kwezvinhu zvese zvevasori izvo zvinowanikwa zvichienderana nesoftware yaunoshandisa.
1 Up-To-Date Kuenzanisa Chati
2 5 nyeredzi foni spy software
3 Mazwi angu ekupedzisira - Yakatemerwa yepamusoro spyware yefoni
Up-To-Date Kuenzanisa Chati
Dzvanya paMufananidzo KUTI Uwedzere
Yepamusoro yakarongwa nhare mbozha spyware software kuenzanisa
5 nyeredzi foni spy software
Yepamusoro yakarongwa spy software Runner-up Zvakanakisisa kutenga
Flexispy mSpy Highster Mobile Spyera Runhare SpySoul
Ndeipi nharembozha spy software yakanakira iwe? Ndeapi musori maficha ane? Chii chiyero icho chine?
Nhare Spy ndiyo yakazvimirira nhare yekushora sosi uye takaita kuenzanisa kweese epamusoro spy software inowanikwa pamusika. Iwo ruzivo akaunganidzwa kwemakore uye ikozvino isu tinoda kukubatsira iwe kugadzira iyo yakazara mufananidzo nezve spy software. Saka kana iwe ukauya kuzoverenga yepamusoro yakarongwa nharembozha spyware software yekudzokorora saka iwe unoda kutsvaga mhinduro yemubvunzo uri pazasi.
Ndeipi spy software yakanyanya kundinakira?
Mhinduro kumubvunzo uyu haisi nyore. Zvese software zvine zvimwe zvakanakira nekuipira. Muzviitiko zvakawanda, izvi zvakaipira ndiwo mutengo asi unodhura kwazvo spy app haisi nguva dzose iri yakanakisa. Kune zvakawanda zvimwe zvinhu zvinogona kukanganisa yako sarudzo uye heano mamwe acho:
Spy maitiro ayo software ane.
Kugadzikana kwespy app.
Yakagadzirirwa zvivakwa zvekutarisa.
Spy app inoshandiswa-inoshamwaridzika kureva. nyore kushandisa.
Ndinga sarudza sei chaiyo kwandiri?
Chekutanga pane zvese, ini ndaizotarisa mune chiyero. Chiyero icho iwe chaunogona kuona muPamusoro ratarwa Spyware zvirongwa tafura yekufananidza yakapihwa nekuda kwemakore ekutsvaga. Vamwe vashori mapurogiramu vane mukana nekuti vane tsika refu yakavatungamira kune yakasarudzika mhando yepamusoro. Pano panomira Spyera foni.
Spyera runhare isoftware iyo yakagadzira nekuunganidza ruzivo. Ivo vakagara vachivandudza yavo spy app uye nhasi vane imwe yekutungamira spy software pamusika. Kune rimwe divi, iyi Anwendung iri zvishoma anodhura. Nekudaro iyi spy software ine chiyero chakanaka kwazvo, iyo app yakatsiga uye vatengi kutsiva vanogara vakanaka. Saka kana iwe ukatora iyi spy software hauzozvidemba.
Kune rimwe divi, FlexiSPY zvakare yakagadzikana spy app ine akawanda akasarudzika spy maficha, ndeye mugadziri anomira kumashure kwechigadzirwa mhando uye zvakachipa. Ivo vane yakanaka kwazvo rutsigiro rwevatengi uye vanopa zvavanokwanisa kupa mhinduro yevatengi kumatambudziko ese.
Mhinduro dzipi dzavanopa?
Iyo nyowani nyowani ficha ndeye kure yekumisikidza sevhisi kune vatengi vedu.
Iye zvino unogona kubhuka chikamu chiri kure neane ruzivo ruzivo, anozo bvisa / jailbreak chipfuro nharembozha nekukuisira FlexiSPY yako. Iyi yekusarudzika sevhisi inodhura $ 39.99, asi ini ndinofunga kuti mune dzimwe nguva inokosha zvakanyanya.
Becaouse zvese izvi ini ndinorumbidza iyi spy app seYAKANAKA CELL PHONE SPY SOLUTION!
Kutanga Kutevera IZVOZVI -> BEST SOLUTION FlexiSPY
Imwe spy software's ine yakanyanya chiyero ndeiyi:
Nei software iyi iri?
mSpy software iyo ine yakanyanya kukwirwa kubva kune vashandisi vayo. Vatengi feedbacks anogara akanaka. Vagadziri veichi chigadzirwa vakaita nhamburiko huru yekugadzira iyo yakagadzikana uye inovandudza app. Chii chinonzi kugadziridza?
Kana uri kutsvaga iPhone mhinduro ipapo mSpy akakukwanira. mSpy ndiye Anwendung wokutanga anogona kuongorora iPhone izvo hazvisi jailbroken uye haufaniri kunyange kuva kuwana foni.
Sei No-Jailbreak uye isina yekuwana mhinduro inogoneka?
Izvo zviri nyore sezvinobvira. Chinhu chega icho mutengi chaanofanira kuita kupinza inodiwa Apple id nePassword mune yepamhepo panhare uye ndizvozvo! Rondedzero yezvinhu zvevasori ishoma asi iyi ndiyo chete mhinduro iri kure pamusika.
Highster Mobile ndeye yanhasi-inotengwa kwazvo spy software uye hunhu hwayo ndiwo mutengo wakanaka uye mazhinji emhando yepamusoro musori maficha. Izvi zvese zvinogadzira ichi chigadzirwa BEST BUY nharembozha yekuongorora chirongwa pamusika.
SpySoul iri pano nekuda kwenzvimbo dzekuongorora. Hatigone kutaura nezve kugadzikana nekuti hazvisati zvazivikanwa pamusika asi isu tinogona kutaura nezve yepamusoro uye ine simba spy software. Zvakare, vatengi vanosarudza iyi software nekuti inokutendera kuti uiise zvekare kubva kune imwe nhare uye kuiisa pane imwe nhamba isingagumi yenguva.
iSpyoo ine ese epamberi spy maficha uye zvakare ine chinhu chimwe chausingakwanise kuwana chero kupi pamusika Multi Devices (3 zvishandiso) ficha. Zvakare, Icho chitsva uye hatigone kutaura nezve kugadzikana saka ini handikurudzire semhinduro yakanaka.
Chinzvimbo 7 kusvika 17 Foni spy software
Nyore Spy Pro
Ox nhare mbozha
Nei isu tichipa yakaderera chinzvimbo kune mamwe spy software's?
Kune zvikonzero zvakawanda nei tichipa mamwe masosi akadzika masoftware. Dzimwe dzadzo dziri…
kufambira mberi maficha,
… Uyezve kana chimwe chigadzirwa chakafanana chiri nani pane ichi. Zvimwe zvigadzirwa senge Runhare Sheriff zvine zvivakwa zvakakura zvekutarisa. Anwendung ichi zvakare akatsiga uye feedbacks zvose zvakanaka asi ane kushaya mberi musori zvinhu. Nei zvakadaro?
Vagadziri veichi chigadzirwa vaedza nesimba kwazvo kugadzira iyi app yemubereki uye bhizinesi kutonga. Ichi chishandiso chine yakasarudzika uye hunyanzvi maficha ayo anoita kuti ive yakakosha. Zvakare, mSpy ndiyo mhinduro iri nani uye kana iwe uchida iyo app yekutonga kwevabereki saka sarudzo huru iwe unenge uri mSpy kwete PhoneSheriff.
Ndeapi spy software asiri kusarudza?
Paunoenda kune imwe peji rewebhu uye woona yakakura software tsananguro. Zvakare, ine zvese zviri mberi pamwe nezvinodiwa maficha uye iwe unofunga kuti izvi ndizvo. Iyi software yakakwana !!!
Ichi ndechimwe chinhu chausingafanire kuita nekuti pamwe ichi chishandiso…
shanda nemamwe mafoni chete,
… Uyezve nezvimwe zvakawanda. Software zvine zviyero zvakaderera zviripo zvine chikonzero. Aya ndiwo ma software ayo Phones spy saiti haina kukupa zano kuti utenge.
Ndeapi ma software ane yehupenyu hwese rezinesi?
Software's ane hupenyu hwese rezinesi nguva ndeaya:
Heano ma software maviri ane yakakwira chiyero Highster Mobile uye SpySoul. Icho chikonzero cheizvo zviri zvevasori maficha uye kugadzikana. ImobiSpy vane mashoma spy maficha uye Spymaster haina kugadzikana sezvainofanira kuve.
Ndeipi spy software ine hupenyu hwese rezinesi nguva yekutanga sarudzo yemutengi?
Sarudzo yekutanga pane mucherechedzo ndeye Highster Mobile Spy. Nezvinhu zvinopihwa kune vashandisi, mutengo uri pasi pane zvimwe zvigadzirwa zvinoenderana uye rezinesi rehupenyu hwese iyi spy app nhasi yakanyanya kutenga spy software. Mune yedu foni mbozhanhare software yekuenzanisa chinyorwa, tinodawo kukupa iwe izere ruzivo nezve zvimwe zvigadzirwa zvakafanana.
Ndezvipi zvakanaka zveimwe rezinesi rehupenyu hwese spy software's?
SpySoul ine simba rakanyanya, ita zvimwe zvekusora uye zvinokutendera kuti udzore nekuisa software pane chimwe chishandiso nhamba isingaverengeke yenguva. Ichi ndicho chiitiko chiri chounyanzvi uye chichava mhinduro yakanaka kana tarisiro ichichinja nharembozha nekuti unogona kufambisa musori software kune chishandiso chitsva.
Nyore Spy ine mashoma spy maficha asi akatsiga uye mutengo wakaderera. Kana iwe uchigutsikana neayo musori maficha iyo inogona yakanaka yekushora sarudzo.
ImobiSpy ine zvese zvakakosha maficha uye haina kudhura. Iyi spy software haisati yazivikanwa pamusika uye ndicho chikonzero nei vanhu vasingashandise uye zvakare haina kugadzikana uye muzviitiko zvakawanda, haishande sezvainofanira.
Spymaster ine simba kwazvo uye inodhura asi haina kugadzikana uye muzviitiko zvakawanda, haishande sezvainofanirwa.
Ndezvipi zvimwe zvandinofanira kuziva nezve mobile spy software's?
Spy software's anoshandiswa echokwadi kushora. Asi pane chimwe chinhu chandinofanira kutanga ndaziva nezvazvo?
Mhinduro ndeyokuti hungu. Kuti usore zvinongedzo nharembozha zviitiko, iwe uchafanirwa kurodha pasi uye kuisa Anwendung pairi kutanga. Iko hakuna imwe yakagadzikana uye iri nani nzira yekushora munhu nhare mbozha.
Nguva zhinji vanhu havazive kuti iyo Android foni mune akawanda kesi inofanirwa kudzika midzi kuti ishande. Yese spy software inoita kuti iwe utarise Facebook, Viber nezvimwewo inofanira kunge yakadzika midzi.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvemidzi maitiro uye maitiro ekuzviita nemazvo tarisa yedu midzi chinyorwa:
Mamwe ruzivo -> Maitiro Ekudzura Android Cell Runhare
Zvakare, iPhone inofanirwa kuve yakaputsika. Jailbreaking inzira isingakuvadzi iyo inobvumidza iwe kuisa kunyorera kubva kwakasiyana masosi kuwedzera kune anowanikwa muApple Chitoro.
Panewo nzira kuongorora Android dzeserura pasina kuva midzi uye iPhones pasina jailbroken.
Ita shuwa kuti spy software inotsigira yako mbozha chikuva.
Ese spy software ari kurodha pasi ruzivo pane ako epamhepo control panel kureva. Software muridzi maseva uye kuti uite izvo zvakanangwa foni inofanirwa kuve neinternet yekubatanidza. Kana zvirinani zvinofanirwa kuve zvakabatana dzimwe nguva izvo zvemashoko zvinogona kuiswa. Yakarongwa pamusoro serunhare spyware tsigira Android uye iOS-based zvishandiso uye FlexiSPY uye Spyera Runhare inotsigira Blackberry uye Symbian OS futi.
Mashoko angu ekupedzisira - Akaverengerwa pamusoro spyware yefoni
Iko kune akasiyana efoni foni spy software iri pamusika. Kuti ubvise zvakanakisa hazvigoneke nekuti 99% spy software's vanoita zvavakagadzirirwa kureva. spy spy foni. Yakakwana software yako ndiyo inogutsa maitiro ako senge…
spy software mutengo,
yakagadzirirwa zvivakwa zvekutarisa,
… Nezvimwe zvakawanda. Nekudaro kubva kumusoro-chinzvimbo runyorwa rweaspy software's, ndinoda kutaura kuti FlexiSPY ndiyo yakanakisa, mSpy ndiyo yakanakisa isina jailbreak solution, uye Highster Mobile ndiyo yakanakisa kutenga mhinduro. Zvakare, cherekedza kuti urwu runyorwa runogona kuve rwakasiyana kubva kumunhu kumunhu.
Nhare dzesori dzinonzwisisa kuti zvakaoma sei kuwana zvinyorwa zvakanaka uye spy software ongororo paInternet uye ndosaka tichigadzira iyi yepamusoro nhare yekuongorora software. Tinovimba kuti kuongorora kwedu kwakabatsira uye kuti iwe uchawana yepamusoro yakarongwa nhare mbozha spyware urikutsvaga.
5 Comments · Siya Komendi
Ndiri kuona here imwe foni isina chero softwere kurodha mune iyo nhare foni.?
Jeff - Mumiriri weKutsigira kwehunyanzvi anoti:
Hongu, unogona pamwe mSpy uye Highster Mobile. Ose mhinduro anotsigira nharembozha isina jailbreak uye hapana kuisa yekutarisa asi ye iPhone ne iPad chete. Iko kune zvekare zvinodiwa uye iwe unopihwa mashoma maficha saka tarisa zvimwe apa:
mSpy hapana jailbreak uye hapana gadza zvichiongororwa: https://www.phonesspy.com/mspy-reviews-rating-2016-pros-cons-overview/
Highster Mobile hapana jailbreak uye hapana kuisa kuongorora: https://www.phonesspy.com/highster-mobile-review/
Ndezvipi zvepamusoro spy software izvo zvisingade rooting?
Kana iwe uchida kushandisa maficha senge enhau midhiya & IM chats yekuteedzera kupfuura ese spy software inodzura mvumo kubva kune yakanangwa foni.
Zvisinei, mSpy ane keylogger chinhu iyo achatora zviri mashoko. Zvizhinji nezve mSpy uye keylogger chimiro pano:
Zvakare, Kana iwe usiri kuda kudzika kubaya foni ini ndinokurudzira FlexiSPY iyo inobvumidza iwe kutarisa yakawanda maficha. FlexiSPY isina-yakadzika midzi nharembozha maficha:
-SIM Chinja Notification
Zvimwe pamusoro peFlexiSPY pano:
ndarasa iphone 4s.i ndine imei nhamba.ndingawana sei chishandiso changu
Leave mhinduro kukanzura mhinduro